Kokudubula Liquid: Ukwakheka, yokusetshenziswa
Umlilo in imvelo ekhaya futhi indlu ezweni namuhla isinqumo ukuze bafeze ngosizo uketshezi ukuze kuvuswe. Kuyinto ekhethekile amakhemikhali ukwakheka, okuyinto Ayinambala futhi ayinaphunga futhi ivumela kungekho isikhathi ukwakha umlilo, kokhela amalahle fuel nezinye zokubasa okuqinile.
Liquid ukuze badutshulwe, okwakhiwa kwalo zingase zishintshe kakhulu, ezifanele ukusetshenziswa ku izoso grills umoya, ukosa inyama, grills futhi umlilo izitofu icwecwe futhi fireplaces. idatha Namuhla ukuxubana ekhiqizwa esekelwe paraffins futhi ifomu umule. Ziyakwazi efanelekayo umlilo ukuze usetshenziselwe ukupheka.
Isidingo ukusebenzisa uketshezi
inqubo Ignition lula, ngoba lokhu kudinga fafaza fuel ingxube, bese ivunyelwa ukuba zihlale imizuzu embalwa. In the isinyathelo esilandelayo kufanele kube ukuba alethe umthombo i ilangabi evulekile, futhi ungathola ilangabi. Ukusebenzisa ketshezi ivumela ukwakha umlilo, ngisho izimo ezedlulele kakhulu, okuyinto kufanele futhi ufake umoya onamandla kanye nomswakama eliphezulu. Ngosizo uketshezi eziklanyelwe kungaba okhela umlilo cishe noma kuphi, nangaphansi kwanoma iziphi izimo, ngisho ukusetshenziswa impahla eluhlaza kufanele ichasiselwe kubo komlilo. Lokhu kuvumela ukusetshenziswa isikhathi abakhululiwe ukwenza ezinye, imisebenzi mnandi ngokwengeziwe.
Lesi sikhungo ingasetshenziswa hhayi kuphela lapho kwenzekani imvelo, kodwa futhi ezifanelekayo ukufuya okusheshayo umlilo ekhaya. Uma uthenga eliphezulu ketshezi ukuze badutshulwe, okwakhiwa kwalo uzobe ashiwo ngezansi, ungathola umlilo ukuthi igqamuka kancane futhi ngaphandle umonakalo empilweni yomuntu. Phela uma umlilo okungazelelwe, ungakwazi bashe.
Uma usebenzisa indlela kumelwe niqaphelisise, ngoba umkhiqizo onesici zingase zephule futhi akwethuse nemiphumela ebuhlungu. Ukuze ukwazi ukubona ukuthi umkhiqizo izinga oyithengile, kumelwe uzijwayeze kwengoma. Phakathi kokunye, uma sicabangela nendlela nomkhiqizi eyaziwa emakethe izimpahla ezifanele. Ngezansi ezimbalwa ongakhetha lapho ungase ukwazi khona ukukhetha nguye ekufanele.
Ukwakheka kanye izici wehlathi ketshezi
Lolu ketshezi I-ukuthungela, okuyinto Ukwakheka sihlinzekela nenye hydrocarbon ketshezi, abakwazi ukushintsha ukunambitheka izitsha okuphekwe. Imikhiqizo zenziwa ngumkhiqizi isiRashiya, futhi ngenxa yalokho aphansi. Kusho ingasetshenziswa kokhela ukhuni, amalahle, briquettes , futhi ephephile impilo.
Ukwakheka mix anobuthi, akashintshi ukunambitheka kokudla futhi akusho ukukhiqiza umusi. Prakthiza libonisa ukuthi isitsha nge ketshezi kuyinto elula ukusetshenziswa, ezokuthutha kanye USB. Cap Ukwakhiwa inezici ezithile ezikhipha ukuvuza. Uma ibhodlela usezandleni izingane ukwazi, sibonga indlela ekhethekile, awusebenzi ukunqotshwa unsealing.
Izibuyekezo uketshezi "eco-standard"
Lolu ketshezi I-ukuthungela, okuyinto Ukwakheka sihlinzekela ingxube kaphala- ketshezi, kuyinto anobuthi. Uma ejenti wakhwela ingxenye enkulu yomzimba, kufanele siyakazwe ngamanzi ngokushesha. Abathengi belulekwa ukugcina emaphaketheni kude amalangabi ovulekile futhi ukushisa imithombo. Uma kubalulekile acime ilangabi, okwakubekelwa buhlanjululwe lolu ketshezi, khona-ke kubalulekile ukusebenzisa umhlaba noma isihlabathi.
Abathengi izaba zokuthi uma ketshezi ivuliwe amalahle noma ilangabi evulekile, flash kungenzeka. Ungayisebenzisi le ekwakhiweni e fireplaces, ukosa inyama yokugezela noma Ohhavini. Gcina ingxube kungaba okushisa ezinconywe imodi umakhi, elinganiselwe phakathi kuka-0 no-30 ° C.
Ngaphambi kokuba uthenge ingxube ukuze usetshenziselwe umlilo, kufanele ufunde kwengoma. Kokudubula amalahle uketshezi "Eco-standard" okumele asetshenziswe ku-algorithm ethile. Umkhiqizo kufanele usetshenziswe ngokulinganayo phezu indawo ukuthungela, abasele kulo isimo imizuzu 2 ukuvumela impahla ukuncela. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ungaqala ukuthungela of. Isihloko sale ncwadi ungenawo ukusebenzisa nge Siyafulesha okungazelelwe, amalahle, ukuba afuthwe ngesibulali-liquid, lofanele kokhela ezolile ilangabi izinze.
Izithako nemiyalo ukusetshenziswa "amandla ehlanzekile" ketshezi
Liquid Kokudubula "Clean Energy", okuyinto isakhiwo sihlinzekela nenye waxes hydrocarbon ketshezi iwumkhiqizo okufanele zisetshenziswe ngokulinganayo ukuze amalahle noma izingodo e eziko noma izoso. Uma isisindo sabo asisikhulu kunenkosi 3 kg, kuyoba okwanele ukuze 250 ml. Ngemva kwalokho ukwakheka ishiywa njengoba phi nye, imizuzu 2, bese ungafaka nophethiloli. Ifomula entsha lo mkhiqizo uphephile mayelana nomzimba womuntu, ke, njengabanye, akakwazi ukushintsha ukunambitheka imikhiqizo.
Yini okudingeka siyikhumbule lapho usebenzisa liquid ukuthungela
Ukwakheka uketshezi kokhela umlilo, okwakubekelwa eshiwo ngenhla akuyona into kuphela odinga ukukwazi lapho uthenga noma usebenzisa lo mkhiqizo. Njengoba wazi, sanda isibalo sabantu abaye bahlupheka ngesikhathi izoso kuleli zwe noma ekhaya lakho siqu. Izivakashi uvame ukuthola ukusha uma usebenzisa uketshezi achazelwe ukuthungela. Abathengi musa bebona kudingekile uzijwayeze isilinganiso emoyeni-fuel, ngakho-ke, ebhekene nezinkinga.
Ochwepheshe ukweluleka ukuthi uthenge lezo izingoma, phakathi izithako okuyizinto paraffins. Uma ubona ilebula equkethe nenye hydrocarbon uketshezi, ngokuvamile kakhulu nomkhiqizi ayicabangayo alcohols. Okubalulekile okunjalo ngeke zishe ngokushesha, kodwa ngokuvamile it is hhayi Kunconywa ukuba uthele emlilweni, njengoba kungabangela ukusha ukuthungela. Ngesikhathi lapho abantu bazame ukwenza lokhu, ilangabi izokhetheka entanyeni ibhodlela, abantu baqale shake kuye, kodwa raspleschet kuphela ketshezi. Ochwepheshe baphawula kutsi ukulimala kungabangela futhi abanye izithasiselo. Ukuze ubone ukuthi umonakalo unga ngokwakho, nithintithe ibhodlela. Uma uthola Foam okuningi, kungenzeka ukuthi umenzi ungeze acetone noma benzene. Lezi izinto aziwa lungachazwa alufakwa.
Ilungiselela uketshezi ukuze kuvuswe izandla zabo
Uma ungafuni ukuthenga Liquid ukuze badutshulwe, ukwakheka yezandla zabo kungenzeka uzilungiselele. Njengoba isizathu ukukhonza elula ... Vaseline, okuyilona elidingekayo ukuze gcoba izinkuni okuzenzela. Lokhu kusho futhi kusetshenzwe ukotini amabhola. Uma usebenzisa i-zokwenziwa isibani, uzovutha ngokushesha. lezimanga ezinjalo zingagwenywa ngokusebenzisa ukuthengwa imikhiqizo ukotini. Hlola okubalulekile kungenzeka ngokuyishisa. Zokwenziwa iqala igcwale amanzi, ukotini ngeke kancane kuvuthe futhi intuthu.
Yebo, ungakwazi ukuthenga esitolo uketshezi ukuze ukuthungela. Ukwakheka, okuyinto sitholakale ubuthi kuvamile impela, ngesinye isikhathi kungcono hhayi ukuyisebenzisa. Ukuze wenze lokhu, abathengi ukuthenga Vaseline, okuyinto Athambisa amabhola phezu yonke indawo. Ngaphakathi imikhiqizo enjalo kumele lomile, akudingeki ukuba aphule. Lokhu kuyokunika umphumela yefilakisi ikhandlela. Lapho kubalulekile ukuba uqale umlilo, ibhola kumele aphambane, ukwembula core ezomile oluzosiza njengoba nezinkuni elivuthayo. uvolo Dry ikhanyisa, bese lelo cala Vaseline, okuzokwenza ushise kancane imizuzu embalwa.
Kuhle ultrasound Aromadiffusors: izithombe kanye nokubuyekeza
Heater amanzi, isitoreji kagesi "Ariston" (Ariston): kudivayisi zebanga
Solid-fuel amaziko esivuthayo eside: ukubuyekezwa kanye intengo. Kungenzeka yini ukuba wenze okuqinile fuel isitofu eside evutha ngezandla zakhe?
Kwagezi isibani - yini enye engcono ukukhetha?
Oshayelayo ngoba jika amasango, izinhlobo zazo kanye injongo
U-Olga Rapunzel kunokuba ahlanganyele ngaphambi komsebenzi: sithola imininingwane
"Toliman" ukuzilibazisa isikhungo (Sysert): incazelo, imisebenzi, ukubuyekeza
Bob Bryar: Biography nemisebenzi
Electrolyte: izibonelo. Ukwakheka nezakhiwo electrolyte. electrolyte abanamandla nababuthaka
Sebenzisa ku-"Letual": isisebenzi sempendulo, izici nemithetho
Izitshalo ukwelashwa indle kwamanzi angcolile yasekhaya. indle
Shampoo nezinwele kusuka brand Dove ( "Ijuba"). Shampoo "Ukulawula nezinwele": ukubuyekezwa, Ukwakheka
10 ezithakazelisa kakhulu lomshado amasiko emhlabeni wonke
Indlela yokufaka i-enclosure yokugeza: izici zenqubo